ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဌာနအကြီးအကဲ Ambassador H.E. Mr. Gilad Cohen ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဌာနအကြီးအကဲ Ambassador H.E. Mr. Gilad Cohen ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ၊ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-5) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှည်လျားပြီး အစဉ်ကောင်းမွန်သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့်ဆက်ဆံရေး၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မျက်မှောက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ အစ္စရေးနိုင်ငံက ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည့် ပညာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်များ၏ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေး ခရီးစဉ်များ၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ မကြာမီကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးဇော်အောင်၊ ဒေါ်မိကွန်ချမ်း၊ ဒေါက်တာစိုးမိုးသူ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။